the truth revealed by nasir ahmad - issuu
THE TRUTH REVEALED အမှန်တရားပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီ
- ဟာဇရာတ် မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်
ကာဒီယန်မြို့သား ကတိတော်လာ မဆီဟ်နှင့် မေဟ်ဒီ
အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင် ဂျမာအတ် တည်ထောင်သူ ဘာသာပြန်သူ - အောင်သန်းလွင် [B.C.Sc (Hons)]
[ မြန်မာဘာသာပြန် ]
Sachcha ika Izhar
[ အူရဒူဘာသာဖြင့် ]
[ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ]
ဟာဇရာတ် မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်
အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင် ဂျမာအတ် တည်ထောင်သူ ရေးသည်။
ပထမအကြိမ် ( အူရဒူဘာသာဖြင့်) ၁၈၉၃ ခုနှစ်ထုတ်ဝေသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် မြန်မာဘာသာဖြင့်
မိတ်ဆက် စာရေးသူအကြောင်း ဟာဇရာတ် မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ် သခင်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာဒီယန်
ခုနှစ်က ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်ဟာကျမ်းမြတ်
ကိုရ်အာန်ကို လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းနှင့် တရားဘာဝနာ စီးဖြန်းခြင်းကိစ္စရပ်များမှာပဲ ဘဝကိုမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ ပစ်မှတ်အဖြစ်နှင့် ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လာ
ကြပြီး မွတ်စလင်တွေရဲ့ နိမ့်ကျတဲ့အခြေအနေတွေကို တွေ့ရှိရတဲ့အခါမှာတော့ အစ္စလာမ့်ဘက်က ခုခံချေပပြီး စစ်မှန်တဲ့ သွန်သင်ချက်များဖြင့် အစ္စလာမ့်ရဲ့ မှန်ကန်မှုကို ထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။ အရာရောက်လှတဲ့ ဘရာဟီနေ ရေးသားမှုတွေ၊ အစ္စလာမ်ဟာ
တကယ့်ကို အထင်ကရဖြစ်ပြီး အရေးပါ
လူသားကို ကိုယ်ကျင့်တရားရေးရာ၊ အသိဉာဏ်ရေးရာနှင့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဘုရားသခင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က သမ္မာကျမ်းစာ၊ ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်နှင့် ဟဒီးစ်တော်များမှာ ကြိုတင်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ပွင့်ပေါ်မည့် မဆီဟ်နှင့် မေဟ်ဒီ အဖြစ်
သူ့ကို ခန့်အပ် တော် မူ ကြောင်း ကိုလည်း
အတိအလင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၈၉
ခုနှစ်မှာ အဟ်မဒီယာ ဂျမာအတ်
အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်မှုများကို စတင်လက်ခံခဲ့ပြီး ယခုအခါမှာတော့ နိုင်ငံပေါင်း နှစ်ရာ (၂ဝဝ) နီးပါးမှာအခြေတကျ တည်ထောင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ပေါင်း
ရှစ်ဆယ် (၈ဝ) ခန့်
နဲ့ ပါရှန် ဘာသာ များဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ဤစာအုပ်အကြောင်း ၁၈၉၃ ခုနှစ် မေလမှာ ဆက်ချာ အိကာ အစ်ဇ်ဟာရ် (Sachaika Izhar)
[ The Truth Revealed] အမည်ဖြင့် ကတိတော်လာ မဆီဟ်နှင့် မေဟ်ဒီ က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်သည် ကတိတော်လာ မဆီဟ်သခင်နှင့်
ခရစ်ယာန် သာသနာပြုအဖွဲ့မှ အဗ်ဒူလာအာသမ်တို့၏ဆွေနွေးပြောဆိုမှုများမှ ပေးစာများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ကြေငြာချက်များကို စုပေါင်း ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အချို့သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျှဉ်း၍
အဟ်လေဟဒီးစ် ခေါင်းဆောင် ရှိုက်ခ် မိုဟာမဒ် ဟူစိန် (ဘတလာဝီ) ထံမှ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး ရရှိသော အကူအညီအကြောင်း
လူဒီယာနာမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သာသနာပြုပုံနှိပ်တိုက်မှတဆင့် ဒေါက်တာ
မာတင် ကလက်ခ် ကိုယ်စား
မလေးစားတဲ့ ကြေငြာချက် တစ်ခုကို မေလ (၁၂) ရက် (၁၈၉၅) ခုနှစ်မှာ
ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ မာတင် ကလက်ခ်ဟာ အမေရိကန် သာသနာပြု
အသင်းရဲ့ ဆေးဝါးပိုင်းဆိုင်ရာမှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေငြာချက်ရဲ့ ဖော်ပြမှုတွေမှာ ဘတလာမြို့က နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ် မော်လဝီ ရှိုက်ခ် မိုဟာမဒ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ဖော်ပြချက် သဘောမျိုးတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ခရစ်ယာန်တွေက သူ့ကို သတိထားမိတာဟာ အောက်ပါ အချက်တွေကြောင့်
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ကလက်ခ်ဟာ ခရစ်ယာန် သာသနာနဲ့ အစ္စလာမ် သာသနာ တို့ကို စစ်ဆေးပြီး အမှားနဲ့ အမှန်ကို ခွဲခြားဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်နဲ့ ပြိုင်ဆိုင် ဆွေးနွေးဖို့ရာ သဘောတူခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အပြန်အလှန် အသေအချာ
အင်မတန်ပဲ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေမိတယ်။ သေမျိုးဖြစ်တဲ့လူသားကို ဘုရားရှင် အဖြစ် လက်ခံယူဆထားတဲ့ ယုံကြည်ချက် အတွေးအခေါ်ကို သေချာစေ့ငှစွာ
စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါ သိရှိသွားမှာက အမှန်တစ်ကယ်တော့ ဒီလောက်
အံ့သြစရာ မကောင်းပါဘူး။ သူ့ကို အားပေးထောက်ခံသူတွေဟာ တုန်လှုပ်
ခြောက်ခြားသွားကြတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဘုရားက ဘုရား လူက လူပါပဲ။
မြေကြီး ဖုံမှုန်၊ ပြာနဲ့ အတိုင်းအဆမရှိ မြင့်မြတ်တဲ့ အရှင်ဘာများတူနိုင်ပါ့မလဲ။
အစ္စလာမ် သာသနာရဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သင်ပြချက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ မှားယွင်းမှုတွေကို ဖော်ထုတ် ပြသမှာကို
ကသိကအောက် ဖြစ်နေကြတယ်။ အဆိပ်ရှိတဲ့ စပျစ်ရည်ဖလားကို သူတို့ နှုတ်ခမ်းကနေ လွှဲဖယ်ပစ်ဖို့
လိုက်ရတာဟာ သူတို့အတွက် ကောင်းမွန်သေးတယ်။ ဒီလို သူတို့ စိတ်ပျက် အားငယ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရှိုက်ခ်ဟူစိန်ဟာ ကြိုးစားခဲ့တော့တာပါပဲ။
ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ထင်မြင်စရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒီလို ဆက်စပ်ယူနိုင်ရသလဲဆိုရင် ဒေါက်တာ မာတင် ကလက်ခ်ပေးပို့လိုက်တဲ့ စာကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီစာထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သူ့ရဲ့ အကျယ်တဝင့်ရေးသားချက်တွေ ဟာ အဟ်လေဟဒီးစ်
တစ်ကယ်လို့များ ကျွန်ုပ်က မော်လဝီရှိုက်ခ်ကို ကျိန်ဆိုခိုင်းမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုကို ငြင်းဆိုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်ုပ်အသေအချာ သိပါတယ်။
ဒီဆက်စပ် ကောက်ချက်ချမှုကို မေလ (၁၂) ရက် (၁၈၉၃)
ခုနှစ်ထုတ် နူရ်ရေ အက်ဖ်ရှန် (Nur Afshan) စာစောင်ရဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်
ကျွန်ုပ်ဆီမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဖော်ပြထားတာက ………
ဂျန်ဒီရာလာမှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီလိုလူမျိုးကိုမှ ယှဉ်ပြိုင်ပြောဆိုဖို့
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ထားတယ်။ သူ့ကို မိုဟာမဒ် သာသနာဝင်ရယ်
လို့တောင် ယူဆနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ အသင်တို့ ဘာကြောင့် ဒီလိုအမှားမျိုး
မှားမိပါလိမ့်? ကာဒီယန်မြို့သား မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အိန္ဒိယ မွတ်ဆလင် အိုလမာနဲ့ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် အိုလမာတို့ရဲ့ ထုတ်ပြန်
ကြေငြာချက်ကို မဖတ်ကြဘူးလား။ဒေါက်တာကလက်ခ်ဟာ ဒီကြေငြာချက်ကို ပြန်လည်
ဖော်ပြထားပါတယ်။ “ကာဒီယာနီ တွေအကြောင်း မေးမြန်းတဲ့
ကို ကိုရ်အာန် ကျမ်းစာ၊ တမန်တော်မြတ် စ္စနဿ္နသ်နဲ့ အိုလမာပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအမိန့်နဲ့ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာရေး အခမ်းအနားတိုင်းမှာ သူတို့ကို မဖိတ်ကြားရဘူး။
ပေါင်းဖော်ခြင်း မပြုရဘူး။ဆလာမ်မပေးရဘူး။ အစ္စလာမ့် အစဉ်အလာပွဲတော် တွေကို
ဖျက်ဆီးတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလိုပဲဖြစ်တယ်။ သူဟာ ဒဂျာလ်ဖြစ်တယ်။ ဟန်ဆောင် လိမ်ညာသူ ဖြစ်တယ်။ ကျိန်စာသင့်နေသူဖြစ်တယ်။ (အယူမှားသူ) မိစ္ဆာ ဒိဌိ ဖြစ်တယ်။
အစ္စလာမ့် နယ်ပယ် အပြင်ဘက်ကဖြစ်တယ်။ မယုံကြည်သူ
သူဖြစ်တယ်။ စာတန်နတ်ဆိုး ဖမ်းစားခံရသူဖြစ်တယ်။ တခြားသူတွေကိုလည်း
လှည့်စားသူဖြစ်တယ်။ စ္စနဿ္နသ်နဲ့ မွတ်စလင် လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အပယ်ခံလည်း ဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေးကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချတဲ့ အကြီးဆုံး ဒဂျာလ် ဖြစ်တယ်။” အပြည့်အစုံကို မော်လဝီ အဗူ ရှိုက်ခ် မိုဟာမဒ် ဟူစိန်ထံကနေ အဖိုး ၁ ရူပီး နဲ့ ပြား ငါးဆယ်ပေးပြီး လာဟိုးကနေ မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက် တွေကို အသင်တို့ မျက်စိလျှမ်းသွားကြတယ်။ အသင်နဲ့ ဂျန်ဒီယာမြို့သားတွေ
ဟာ အသုဘဝတ်ပြုမှုတောင် လုပ်မပေးနိုင်တဲ့သူကို ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် မြှောက်ထားတာဟာ တကယ်ကိုဆိုးရွားတဲ့အမှားကို ကျူးလွန်မိထားတာပဲ။ ဘယ်နှယ့်လုပ်ပြီး ဒီလိုအညာမိနေရတာပါလိမ့်?”
ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးဟာ ဘတလဝီမြို့သားဆီက ဘယ်လောက်တောင်
အကျိုးအမြတ်ရသွားသလဲဆိုတာ မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ တခြားကျွန်ုပ်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေလဲ
ဒီအကြောင်းအရာကိုမဆက်ခင်မှာ ကျွန်ုပ်ကျေနပ်နှစ်သက်မိတဲ့အချက်အလက် တစ်ခုအကြောင်းပြောပါရစေ။ ကျွန်ုပ်ကို သစ္စာရှိတဲ့ ဂျန်ဒီယာလာ မြို့သားတွေ ဒီဆိုးဝါးတဲ့ စာစောင်ကို ဖတ်ရှုရတဲ့အခါ
ယိမ်းယိုင် မသွားပါဘူး။မီယာန်မဟ်မွတ်ဒ် ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က လိမ္မာစွာနဲ့ ချက်ချင်း ပြန်ပြောတာက
“ခရစ်ယာန် အပါအဝင် ဘယ်လိုဘာသာယုံကြည်မှုမျိုးမှ
အပြန်အလှန် ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှုတွေကနေ လွတ်ကင်းကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။”
သူနောက်ထပ် ချေပပြောဆိုတာက အစ္စလာမ့်သူရဲကောင်းကို လိမ်လည်သူလို့
မတရားကြေငြာတဲ့မော်လဝီတွေသာ အမှန်တကယ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူလို့ သူသတ်မှတ်ယူဆတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
သတိပေးစာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ အာရဗီဋီကာ၊ကစီဒါရေးသားချက်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်ုပ်ရဲ့
ပေးစာကို ရှိုက်ခ် ဘတလာဝီက အကြောင်းပြန်စာရေးပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ၂ ကြိမ်
တိုင်တိုင် ကျိန်ဆိုပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကတိနှစ်ကြိမ်အတွက် ၁၆ ရက်ကြာခဲ့ ပါပြီ။
ရှိုက်ခ်ရဲ့ ကတိပေးချက်နဲ့ ဒါကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းက သူဟာ
အကျပ်အတည်းထဲ ရောက်နေတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်အရင်က ကျွန်ုပ်ဟာ အမ်ရစ်ဆာမြို့မော်လဝီတွေဆီက
တိုတို ရှင်းရှင်း စာတစ်စောင်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်ဟာ အီစာနဗီရဲ့သေခြင်း၊ ရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ပြောဆိုမည် ဆိုလျှင် သူတို့ဟာ ဒေါက်တာကလက်ခ်ဘက်မှာသာနေမှာဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရှိုက်ခ်မိုဟာမဒ်နဲ့သူ့လူတွေကိုကျွန်ုပ်အသိပေးချင်တာက
အသင်တို့ အစွမ်းရှိသလောက်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ကျွန်ုပ်ကစိန်ခေါ် ပြောဆိုလို ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်အနေနှင့်ကတော့ မလွဲဧကန် ဒေါက်တာကလက်ခ်နဲ့
ဒီအကြောင်းအရာအပေါ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ပြောဆိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်တို့က ဆန္ဒရှိခဲ့ရင် ကြိုက်ရာနည်းလမ်းနဲ့ သူ့ကို ကူညီဖို့အတွက် လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့် ရှိပါတယ်။
“သိလော့။ အရှင်မြတ်သည် လိမ်ညာသူများအပေါ်
ဒေါက်တာ မာတင် ကလက်ခ် တင်ပြခဲ့သော
အချက်အလက်မှ မှားများအပေါ်းများအပေါ် ရှင်းလင်းခြင်း
မေလ (၁၂) ရက် ၁၈၉၃ ခုနှစ်မှာထုတ်တဲ့ နူရ်ရေအက်ဖ်ရှန် (Nur Afshan)
စာစောင်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲမှာပါတဲ့ ကြေငြာချက်အရအစဿ္စလာမ့်အသိအမှတ်ပြု အိုလမာများက ကျွန်ုပ်အား အယူအသိဖောက်ပြန်သူဟု ကြေငြာသည့်အပေါ် မော်လဝီ ရှိုက်ခ်ရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေထဲမှာ ဒေါက်တာကလက်ခ် ပါသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ်
သူကိုယ်တိုင်က အခြားသူများကို လှည့်စား မှားယွင်းအောင်
ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ ဒီကြေငြာချက်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
အိုလမာပညာရှင် အယောက် (၄ဝ) ဟာ ကျွန်ုပ်နဲ့ အတူရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီလိုပြောရတာကတော့ ကျွန်ုပ်နဲ့ပြိုင်ဘက် မော်လဝီတွေဟာ အမည်ခံများသာ ဖြစ်ပြီး
သိစေချင်တာပါပဲ။ တကယ်လို့ ဒေါက်တာ ကလက်ခ်ဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ ပြောဆို ချက်ကို ချဲ့ကားပြောဆိုတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင် မှန်ကန်မျှတတဲ့
ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ အိုလမာတွေနဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြောဆိုမှုကို တက်ရောက်နားထောင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီယှဉ်ပြိုင်ပွဲဟာ သိပ်မဝေးတော့ပါဘူး။
ဇွန်လ (၁၅) ရက် ၁၈၉၃ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့ အတိုက်အခံဖြစ်သူ မော်လဝီ ဂူလာမ်
အမြင်တူ လာဟိုမြို့က အိုလမာများ အပါအဝင်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏
အနည်းငယ်သော ပညာရှင် အချို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြောဆိုဖို့ရာ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ကလက်ခ်ဟာ ကွဲပြားတဲ့
အသင်းနှစ်ခုမှာ ဘယ်အသင်းက မှန်ကန်တဲ့ဘက်ရပ်တည်ပြီး ဘယ်အသင်းက မရှင်းမလင်းမပြတ်မသားနဲ့ သူကိုယ်တိုင်
ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Seeing is believing)
မြင်တွေ့ခြင်းဟာ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပါပဲ။ ကျွန်ုပ်ကို အတိုက်အခံလုပ်တဲ့
ဘက်တော်သားတွေဟာ ပညာရှိ ပညာတတ်တွေရဲ့
မက္ကာနဲ့ မဒီနာဟာ အစ္စလာမ်ရဲ့ ထူးခြားလေးနက်တဲ့ အရပ်ဖြစ်ပြီး
အစ္စလာမ့် အသိပညာသင်ယူမှုရဲ့ အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဒေါက်တာ
ကလက်ခ် ကောင်းစွာသတိထားမိပါတယ်။ အရှင်မြတ်သည် ဤမြင့်မြတ်သော နေရာများအပေါ်
ကျွန်ုပ်နဲ့ ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဥပမာသက်သေအနေနဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ အာရဗ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီက စာ (၃) စောင်ကျွန်ုပ်ဆီမှာ ထုတ်ပြစရာရှိပါတယ်။
အဲဒီထဲက ပထမစာစောင်ကတော့ အာရဗ်ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့
စာအုပ် အာအိုင်နေကာမလက်တေ အစ္စလာမ်စာအုပ် အထူးသဖြင့် တဘလစ် ဆိုတဲ့
မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုထားပါတယ်။ အာရဗ်ကမ္ဘာရဲ့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
မော်လဝီ ဟာဖစ် မိုဟာမဒ် ယာကွဗ် ဒေဟ်ရာဒန်အရပ်မှ စာရေးလိုက်သည်မှာ အသင်ဟာ
အထောက်အပံ့ရရှိသူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ အရှင်မြတ်က ဒီအိုလမာတွေကို
ကျွန်ုပ်သံသယ မရှိပါဘူး။ အသင့်ကို ဆန့်ကျင်မှုရဲ့ သူတို့ ဘာမှရရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်ဒီစာကို ရေးနေချိန်မှာ အာရဗ်ပညာရှင် တစ်ဦးဟာ
ရှိနေပါတယ်။ သူက ဆီးရီးယားကဖြစ်ပြီး ဆရက်ဒ်နွယ်ဝင်လည်းဖြစ်တယ်။ နောက်သူဟာ
လင်္ကာပေါင်းများစွာကို အလွတ်ကျက်မှတ်ထားသူ၊ ကြီးကျယ်တဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ရှည်လျားစွာ ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်က ရိုးသားစွာနဲ့ တဝါဖီ
ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ယူပုံကို ပညာတတ်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူဟာအံ့အားသင့်ပြီး ကြက်သေ သေသွားခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်ဟာ အသင့်ရဲ့ အာရဗီစာအုပ် အာအိုင်နေကာမလက်တေ အစ္စလာမ် ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက ဒီအလွန်လှပ
အံ့သြသွားခဲ့တယ်။ ဒီအင်ဒီးယန်းလူမျိုးလောက် ဘယ်အာရဗ်လူမျိုးမှ ဒီလို
စကားလုံးကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့ ရေးသားနိုင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူကထုတ်ဖော် ပြောဆိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်အသင့်ရဲ့ ကစီဒါဟ်ကို ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့
သူဟာမျက်ရည်များပင် ကျလာခဲ့ပါတယ်။ သူဖတ်ရှုကြည့်တဲ့အခါ
အာရဗီကဗျာလင်္ကာတွေရဲ့ အခြေအနေဟာ ဘယ်လောက်တောင် ဝမ်းနည်း စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ခံစားမိပြီး သူဟာအသင့်ရဲ့ ကစီဒါဟ် လင်္ကာကို အလွတ်ရအောင်
တိုင်တည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ပညာတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေက ပြောဆိုတာက အသင်နဲ့
အယောင်ဆောင် တမန်တော် မိုဆိုင်လ်မာဟ်သာဖြစ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးမှုပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အသင်ဟာ ဖြစ်ပြီး
ကျွန်ုပ်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။ အသင့်ရဲ့ ရေးသားချက်စကားလုံးတွေဟာ
လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကလာတဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်ဟာအသင့်ကို ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက် ကျွန်ုပ်ရဲ့
အာရဗ်ပညာရှင်တစ်ဦးထံမှ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာသော စာစောင် ဘုန်းတန်ခိုးတော်အရှင် မဟာကရုဏာတော်အရှင်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ဖြင့်
ချီးကျူးစကား အဖြစ်နဲ့လာပြောနေလေရဲ့။ အသင်ရှိနေခြင်းက အချိမြိန်ဆုံး၊
အလှပဆုံးပန်းပွင့်တွေရဲ့ ရနံ့ထွက်ပေါ်ရာဖြစ်စေတယ်။ အသင့်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုက လူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေမှာ ဖုံးကွယ်နေတုန်းပဲ။ အသင်ဟာ မကောင်းမှုကံကြမ္မာ တွေက လွတ်ကင်းသူဖြစ်တယ်။
ကျယ်ပြောလှတဲ့ အသိပညာနဲ့ သင်ယူခြင်း ရေပြင်ထဲမှာ အဆုံးမရှိ ရွက်လွှင့် နိုင်ပါစေ။ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ နားလည်မှုတွေကို အသင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိင်ပါစေ။ လူတွေဟာ အသင့်ရဲ့
နိုင်လောက်တဲ့ ကောင်းမြတ်မှုတွေရဲ့သက်သေဖြစ်လာစေတော်မူပါ။အသင့်ကို ချီးကျူးမည့် စကားလုံး၊ အသင့်ကိုဆုတောင်းပေးရန် စကားလုံး၊ အသင့်ကို တွေ့ချင်လွန်းလှသည်များကို ဖော်ပြရန်စကားလုံးများကို ကျွန်ုပ်မရွေးချယ် နိုင်တော့ပါ။
အရှင်မြတ်ထံမှ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများနှင့် ငြိမ်းအေးမှုသက်ရောက်ပါစေ ဒီစာဟာ
နှလုံးသား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိသူ တစ်ဦးရဲ့
အမှတ်လက္ခဏာ ပါတဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသင်နဲ့ နီးစပ်မည့်
တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှာ မွှေးလိုက်တယ်။ ဒါကို မီးငြှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အပူတပြင်းစိတ်ဆနဿ္ဒနဲ့ စွန့်စားခရီးသွားဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွာပြီး
ကျွန်ုပ်ဟာ ဟာဖစ် မော်လဝီ ယာကွဗ်နဲ့ တွေ့ဆုံရပါတယ်။ သူ့အား
ရေတွက်မရသည့် မကောင်းမှုအညစ်အကြေးများမှ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်က
ပြောဆို ကြတယ်။ ပြောပြပါတယ်။
ရှည်ရှည်လျှားလျှား မေးမြန်း မိတယ်။
ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အသင့်ရဲ့ လှပမြင့်မြတ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်မှုကို ကျွန်ုပ်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါ လိုခဲ့ပါတယ်။
ပြောဆိုသူရဲ့ အရည်အသွေးဟာ သူ့ရဲ့
စကားလုံးတွေအပေါ်မှာ ထင်ဟပ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ရတာဟာလည်း သူ့အကျိုးနဲ့သူရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်
တမန်တော်မူဆာဟာ ဘုရားသခင်ကို ဖူးတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်
နွေရာသီရဲ့ အပူဒဏ်၊ ကျွန်ုပ်ရဲ့ငွေကြေးချို့တဲ့မှုနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမယ့်သူမရှိခြင်း တို့က အသင့်ဆီလာဖို့အတွက် ကန့်လန့်ဖြတ် ပိတ်ပင်ထားကြတယ်။ လေ၌ပျံနိုင်စွမ်းအား ကျွန်ုပ်မှာရှိလျှင်
မနှေးအမြန် အသင့်ဆီပျံတက်၍ လာပါမည်။
ဖြစ်ရလေ! ကျွန်ုပ်၏အတောင်များ ညှပ်ခံထားရသည်
အတောင်မရှိတဲ့ငှက်ဟာ ဘယ်လိုများ ပျံသန်းနိုင်ပါ့မလဲ။
ကျွန်ုပ်အသင့်ဆီ လူကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်သော်လည်း အနည်းဆုံး
“စာရေးခြင်းဟာ တစ်ဝက်တွေ့ခြင်း မည်၏”
ဆိုတဲ့စကားပုံတစ်ခုလိုပါပဲ။ အရာဝတဿ္တုတစ်ခုကို သတိပြုမိရုံက အမှန်တကယ်
သိနားလည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားဖူးမှသာလျှင် ယုံကြည်
နားလည်သဘောပေါက်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကတော့ သူ့မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်ရမှာပါပဲ။
စိတ်နှလုံးသား၌ထိခိုက်ခံစားရသောပေးစာသို့ ကျွန်ုပ်၏ ပြန်စာ
အလဿ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ချီးကျူးပါ၏ အရှင့်တမန်တော် (ဆွ) ပေါ်သို့ ကောင်းချီးမဂဿင်္လာများ သက်ရောက်ပါစေ
အလဿ္လာအရှင်မြတ်ထံမှ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် ကောင်းချီးမဂဿင်္လာများ အသင့်အပေါ်သို့ သက်ရောက်ပါစေ
မိတ်ဆွေ အသင့်ရဲ့ ချစ်ကြည်မြတ်နိုးလှသော စာကို ကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကို
ကျွန်ုပ်ဆီကို စာရေးတဲ့သူဟာ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်၊ အသိပညာပြည့်ဝတဲ့အပြင် ထွင်းဖောက်မြင်တတ်ပြီး
ကောင်းချီးပေးခံရသူဖြစ်ကြောင်းစာဖတ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်ခံစားသိရှိပါသည်။ ဒီအတွက် ကျွန်ုပ်ကို စိတ်အားဖြည့်စရာ ပေးတော်မူသော အရှင်မြတ်ကို
အသင့်အား ချစ်ခင်လိမ့်မည် လို့ ကျွန်ုပ်ကို ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူထားပါတယ်။ အာရဗ်နဲ့
ဆီးရီးယားက ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရည်စူးပြီး ကျွန်ုပ်ကို
ကျွန်ုပ်စာရေးနေစဉ် ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတဲ့ ရက်တွေမှာပဲ အသင့်ရဲ့စာဟာ ကျွန်ုပ်ဆီ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင့်ကို လာမယ့် အရှေ့နဲ့
အနောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့ အတိတ်နိမိတ်နဲ့ ပထမဆုံး အသီးအပွင့် အဖြစ် မှတ်ယူမိပါတယ်။ မြင်တွေ့
ကျွန်ုပ်ရဲ့ စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလည်း အသင့်ကို
မဟုတ်တမ်းတရားများနဲ့ စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ် ပြောဆိုနေကြပြီး
မယုံကြည်သူအဖြစ် ခေါ်ဆိုနေကြပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ သူတို့နဲ့ သူတို့အသိဉာဏ်ရဲ့ အခြေအနေကို ကျွန်ုပ်သုံးသပ်ပြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်က သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သံသယရှိပါတယ်။
ကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်တော်မူတဲ့ အရှင်မြတ်ရဲ့ ရှေ့တော်မှောက်မှာ ပမာမခန့် ပြုလုပ်နေကြတာကို
ခေါ်ဆိုတာကိုမရပ်တန့်ကြသေးတဲ့အပြင်ကျွန်ုပ်ကိုထိခိုက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ် စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတုန်းပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့
ပြောဆိုမှုတွေဟာ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူကြောင်းယုံကြည်သူကို မိစ္ဆာ ဒိဌိအယူမှားအဖြစ်
စာတန် နတ်ဆိုးကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူ ပွင့်ပေါ်လာပြီး ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်ရှင်သန်အောင်ပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်
နားမလည်ကြဘူးလား မသိဘူး? အမှောင်မိုက်က ပျံ့နှံ့နေပြီး အမှန်တရားရဲ့ လမ်းကြောင်းတိုင်းကို ဝေဝါးစေတဲ့ တိမ်မဲတွေကို သူတို့မမြင်ကြဘူးလား? အမှောင်ထုကနေအလင်းပေးတဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ဘာသာတရားကို ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ အစ္စလာမ့်ရန်သူကို မမြင်ကြပေဘူးလား ?
လက်ဝါးကတ်တိုင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး သေမျိုးဖြစ်တဲ့လူသားကို ဘုရားသခင်
အဖြစ်မှတ်ယူတဲ့ လူတစ်စုဟာ ထကြွလာခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ လိမ်ညာလွဲမှားမှု တွေနဲ့လောကီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေသာပိုင်ဆိုင်ကြပြီး များစွာသော လူတွေကို
လမ်းမှား လမ်းလွဲကို ဦးတည်ရောက်ရှိသွားစေတယ်။ အလင်းမရတဲ့ မျက်ကန်း
တွေဟာ သူတို့ဘက်ကိုပါနေကြပြီး လူအများအပြားဟာလည်း သူတို့ရဲ့အမှား ကျော့ကွင်းထဲကို မိသထက်မိနေပါတယ်။
အားနည်းမှုတွေထဲမှာ နစ်မြုပ်နေတဲ့ ဒီမွတ်စလင်လူစုကို အရှင်မြတ် မြင်တွေ့
တော်မူတဲ့အခါအရှင်မြတ်ကသူ့အစေတော်တွေထဲမှတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်မှု ပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့နဲ့ အောင်နိုင်မှုပေးဖို့အတွက် စေလွှတ်တော် မူခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့ညီအစ်ကိုတော်! ရှည်လျှားတဲ့ညကာလဟာ အစ္စလာမ်သာသနာ
ပေါ်မှာရှိနေခဲ့ပြီး အမှန်တရားဟာလည်း ရှေ့ဆက်မလှမ်းဘဲ ရပ်တန့်နေခဲ့ပါပြီ။ အရှင်မြတ် ကြည့်ရှုတော်မူတဲ့အခါ
ထောင်ထား မာနတက်မှုတွေ လူတွေဟာ
အလင်းရောင်ကို အရှင်မြတ်၏နိမိတ်လက္ခဏာတော်အဖြစ်နဲ့ မိုက်မှားတွေဝေ မှုများမှကင်းဝေးရအောင် ဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်ရွယ် ရိုးသား သစ္စာရှိတဲ့အပြင် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ လူကောင်းလူမွန်
တစ်ယောက်အဖြစ် မှန်းဆယုံကြည်မိလို့ပါပဲ။ သူ့လူတွေကကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ပြီး
ငြင်းပယ်ခံနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖို့ သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝနေတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားကို ဝမ်းမြောက်စေပါတယ်။
သနားကြင်နာတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင့်အပေါ်
ကရုဏာသက်ပါစေ၊ အသင့်အားကောင်းကျိုးဆုလာဘ်များပေးတော်မူပါစေ။ မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်
မက္ကာမြို့မှ အာရဗ်ပညာရှင်တစ်ဦးထံမှပေးစာ သနားကြင်နာတော်မူသောအလ္လာရှင်မြတ်၏နာမတော်အားဖြင့်အစပြုပါ၏။
ခံထိုက်တော်မူပါ၏။ အရှင်မြတ်၏ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော တမန်တော်မြတ်သခင် ထံသို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာသက်ရောက်ပါစေ။
လေးစားမြတ်နိုးရပါသော ဆရာသခင်၊ မဆီဟ်သခင်၊
လမ်းညွှန်တော် ဟာဇရတ် မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်သခင် အသင့်အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေ။
ငြိမ်းအေးခြင်းနှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာ အသင့်အပေါ်သက်ရောက်ပါစေ။ အသင့်ထံမှ
အသင့်ရဲ့ သားတော်ဖြစ်သလို့ ကျေးကျွန်လည်းဖြစ်ကြောင်းကို အရှင်မြတ်နဲ့ အသင့်ရှေ့မှောက်မှာ ဝန်ခံပါတယ်။
အရှင်မြတ်သည် အသင်၏ အခြေအနေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အသင့်အား ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆုလဒ်များ သွန်းလောင်းပေးပါစေ။
မိုဟမ္မဒ်ဘင် အဟ်မဒ် မက်ကီး အသင့်ရဲ့ စာအုပ်ထဲက ရေးသားချက်တွေကြောင့် ကျွန်ုပ်ရဲ့ခံစားချက်တို့
နိုးထခဲ့ရပါတယ်။ အသင့်နဲ့တွေ့ဖို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သာလျှင် ချီးမွမ်းခြင်းခံထိုက်တော်မူပါတယ်။အသင်ဟာအရှင်မြတ်စေလွှတ်တော်မူတဲ့သူ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ်ကအသင့်ကို ယုံကြည်ပြီး အသင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။ ကျွန်ုပ် ထပ်မံပြောချင်တာက
မိုဟမ္မဒ်ဘင် အဟ်မဒ် မက်ကီး ရှာရစ်ဖ် မွတ်စ်တဖာ၏သား အာရဗ်ပညာရှင် ဆရက်ဒ် အလီ ရေးသားပေးပို့သောစာမှ ကောက်နှုတ်ချက်
စာပေါင်းများစွာကို ရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ သူ့စာထဲက
လေးစားခင်မင်ရပါသော မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ် ကျွန်ုပ်ဆလာမ်ပေးပါတယ်။ အသင်ဟာပညာဉာဏ်အလင်းရတဲ့ ပညာရှိ
စေတမန်ဖြစ်ပြီး ဗျာဒိတ်တော်တွေလက်ခံရရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ့်
အုပ်ချုပ်သူ မဏ္ဍိုင်ဖြစ်သလို အစ္စလာမ့်ဘာသာရဲ့ အလင်းပေးတဲ့ ဘုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသင့်ရဲ့ထူးမြတ်မှုတွေဟာ ညကောင်းကင်ရဲ့ တောက်ပတဲ့ကြယ်များ
အလားပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလူတိုင်းကတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အသင်ဟာ သင်ယူခြင်းနှင့်
သဘောထားကြီှးတဲ့ အသိပညာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်ပါတယ်။
အသင်ဟာ ထိုအသိပညာများ၏ စမ်းပေါက်လည်း ဖြစ်ပြန်ပါတယ် နောင်တစ်ချိန်မှာ
ရေးသားချက်အလုံးစုံကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကောင်းထုတ်ဝေပါအုံးမယ်။ ယခုတော့ ဤမျှနှင့် လုံလောက်ပါပြီ။
ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ၌ ရှုံးနိမ့်ခဲ့လျှင် အစ္စလာမ်ကို လက်ခံမည်ဆိုသော ဒေါက်တာ
မာတင်ကလက်ခ်၏ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာအဗ်ဒူလာအာသမ်၏ကတိပေးချက် ဒေါက်တာ ကလက်ခ်၏မူလလက်ထောက်ဖြစ်သူ အဗ်ဒူလာ အာသမ်၏
ကတိပေးချက်များကို အောက်မှာ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူဟာ ယခုတော့
ဂုဏ်သရေရှိ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကတိပေးချက်ဟာ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုပြောဆိုဖို့ရာ
ဒေါက်တာ မာတင် ကလက်ခ်နဲ့
လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအကျိုးပြချက်တွေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ အတိတ်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုများ ဆိုရင် သူဟာအစ္စလာမ်ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
(၉) ရက် မေလ ၁၈၉၃ ခုနှစ်အမ်ရစ်ဆာမြို့မှ အဗ်ဒူလာ အာသမ် ရေးသားပေးပို့သော စာစောင်၏ မိတ္တူ
ကာဒီယန်မြို့အကြီးအကဲ မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ် သို့ ဟူဂျာတူလ်အစ္စလာမ် (Hujjatul Islam) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ အသင်
ရေးသားထားတာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ကျွန်ုပ်ကြေငြာလိုတာက အသင်သို့မဟုတ် အခြားတစ်ယောက်ယောက်က ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်ဟာ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီး အရှင်မြတ်၏ ဂုဏ်အရည်
အသွေးများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ထင်ရှားတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ သို့မဟုတ် သံသယကင်းရှင်းတဲ့ အကြောင်းအကျိုးပြချက်နဲ့ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်
ကျွန်ုပ်ဟာ မုချမွတ်စလင် တစ်ဦးဖြစ်လာပါမယ်။
ကြေငြာချက်အနေနဲ့ မဖော်ပြခဲ့မိရင် ကျွန်ုပ်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
အဗ်ဒူလာဟက် ဂဇာနဝီ ထုတ်ဝေသော ကြေငြာချက်အပေါ် တုံပြန်ချက်အနေဖြင့် မိုဘာဟီလာ စိမ်ခေါ်မှု ဖိတ်ခေါ်စာ
၂၆ ရက် ရှောင်ဝလ်လ ဟစ်ဂျရီ ၁၃၁ဝ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်က ရှောင်ဝလ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ဟစ်ဂျရီ ၁၃၁ဝ ခုနှစ်နေ့စွဲနဲ့
ထုတ်ပြန် တဲ့ အဗူဟက် ဖတ်ရှုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ သူဟာ ကျွန်ုပ်ကို မိုဘာဟီလာ
ဒါကြောင့် သူနဲ့ ကျွန်ုပ်ကို မယုံကြည်သူဟု ဟန်ဆောင် လိမ်ညာတဲ့ ပညာရှင်များနဲ့
ဇူလ်ကအ်ဒါဟ်လရဲ့ (၃) ရက်နဲ့ (၄) ရက်နေ့တွေမှာ
ရှိနေပါမယ်။ မိုဘာဟီလာပြုလုပ်မယ့်နေ့ကို ဇူလ်ကအ်ဒါဟ်လရဲ့ ၁ဝ ရက်နေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီဥတုမကောင်းခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် အခြားနှောင့်နှေးစေတဲ့
ဘယ်လို နှောင့်နှေးမှုမျိုးကိုမှ လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ကျကောင်းနောက်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနောက် ခန်းဘဟာဒူး မိုဟမ္မဒ် ရှားဗလီရဲ့ ကပ်လျှက် အီဒ်ဂါ ကွင်းပြင်မှာ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်ဟာ အစ္စလာမ့်မှန်ကန်မှုအပေါ် ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ၁၂
သိရှိဖို့က မနက်ပိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုတွေရှိနေမှာဖြစ်ပြီး နေ့လည် ၂ နာရီ
ကနေ ညနေအထိ ကျွန်ုပ်အားလပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း အသိပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၁ဝ ရက် ဇူလ်ကအ်ဒါဟ်လ သို့မဟုတ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရင် ၁၁ ရက် ဇူလ်ကအ်ဒါဟ်လ ၁၃၁ဝ ဟစ်ဂျရီခုနှစ်မှာ ကျွန်ုပ်ရဲ့
ပြိုင်ဘက်တွေဟာကျွန်ုပ်နဲ့ မိုဘာဟီလာစိမ်ခေါ်မှုကို ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်က ကလီမာဆိုပြီး ကစ်ဘလာဘက်မျက်နှာမူဝတ်ပြုတဲ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့
အကြားမှာ တူညီတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိပါလျက်နှင့် ကျွန်ုပ်ကိုမယုံကြည်သူလို့
သတ်မှတ်ယူဆထားတဲ့ အခြားသောအိုလမာများဟာ ၁ဝ ဇူလ်ကအ်ဒါဟ်လမှာ သူတို့လည်းအတူပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
မိုဟိုက်ယူဒင်၊ မော်လဝီ အဗ်ဒူလ် ဂျာဗရ်၊ ရှိုက်ခ် မိုဟမ္မဒ် ဟူစိန်(ဘတလဝီ)၊ လူဒီယာနာမြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာ မွန်ရှီး ဆဒွတ်လာ၊ အဗ်ဒူလာ အဇစ်၊
မွန်ရှီး မိုဟမ္မဒ် အိုမရ် (အစိုးရ
ဝန်ထမ်းဟောင်း လူဒီယာနာ)၊ လူဒီယာနာမြို့အကြီးအကဲ မော်လဝီ မိုဟမ္မဒ် ဟာစန်၊ ဒေလီမြို့မှ မီယာန် နဇီးရ် ဟူစိန်၊ ပီးရ် ဟိုက်ဒါ ရှား၊ ဝဇီရာဘက်ဒ်မှ ဟာဖစ် အဗ်ဒူလာ မာနန်း၊ မီယာန်း အဗ်ဒူလာ တွန်ကီး၊ ကိုဆရ်မြို့မှ မော်လဝီ ဂူလာမ်ဒတ်စ်တာဂီရ်၊ မော်လဝီရှားဒင်း၊ လူဒီယာနာမြို့အထက်တန်းကျောင်းမှ
ကျောင်းဆရာ မော်လဝီ မွရ်ှတက် အဟ်မဒ်၊ မော်လဝီ ရာရှစ် အဟ်မဒ်ဂန်ဂူဟီ၊ မော်လဝီ မိုဟမ္မဒ် အလီ၊ ဂူဂျရန်ဝါလားခရိုင် ဘော်ပရန်မှ ဝါအစ်၊ မော်လဝီ မိုဟမ္မဒ် အစ္စဟာက် နှင့်
ပါတီရာလာမှ စိုလိုင်မန် ၊
ဘတလဝီမြို့မှ စာဂျေဒါ နာရှင်း၊ ကရင်းမ် ဘက်ခ်ရှ် ပုံနှိပ်တိုက်မှ အလုပ်သမား မော်လဝီ မိုဟမ္မဒ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍
မှတ်ပုံတင်ပြီး စာတိုက်ကပေးပို့တဲ့ ကြေငြာချက်ကို
ထိုသူတို့၏ မှားယွင်းမှုများ၏ ငြင်းပယ်မှုမှာ
သူတို့ထဲက အဦးဆုံးသူကတော့ အဟ်လေဟဒီးစ် စာရေးဆရာ ရှိုက်ခ်
မိုဟမ္မဒ် ဟူစိန်(ဘတလာဝီ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြုလုပ်ဖို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်မှာ အမ်ရစ်ဆာမြို့ကို လာရောက်ပြီး ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဖို့
ကျွန်ုက ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးကို မကြာခဏလုပ်နေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း
ကိုလည်း အသိပေးထားပါမယ်။ မိုဘာဟီလာဟာ အသာလေးအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ ပေါ့သေးသေး ကိစ္စရပ်လဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စဟာ တစ်ကြိမ် ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် အားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီကြေငြာချက်ကို နောက်တစ်ကြိမ်
အရှက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ နောက်ကွယ်ကနေ ကျွန်ုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထင်ရာမြင်ရာ
ပြောခွင့်ရှိမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မတရားသောကြေငြာချက်တွေကို
ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ဒီကြေငြာချက်ရဲ့ မိတ္တူပေါင်းများစွာကိုလည်း မှတ်ပုံတင်ပြီး စာတိုက်တွေကတစ်ဆင့်
ဒီကိစ္စရပ်ပြီးတဲ့နောက် မိုဘာဟီလာ၌ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်အား
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်ုပ်ပြောချင်တာက မိုဘာဟီလာမပြုလုပ်မီ
ကျွန်ုပ်ကို မယုံကြည်ငြင်းပယ်သူလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ လူထုရှေ့မှာ ကျွန်ုပ်ဟာ မွတ်စလင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြဖို့ရာ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရှိပါတယ်။
လမ်းညွှန်မှု လိုက်နာသူများအပေါ် ငြိမ်းချမ်းခြင်း သက်ရောက်ပါစေသော် မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်
ရှောင်ဝလ်လ ၃ဝ ရက် ၁၃၁ဝ ဟစ်ဂျရီခုနှစ်
နိဂုံး - အကယ်၍ ရှိုက်ခ်မိုဟမဿ္မဒ် ဟူစိန်ဟာ ဇူလ်ကအ်ဒါဟ်လ ၁ဝ ရက် ဟစ်ဂျရီ ၁၃၁ဝ မှာပြုလုပ်မယ့် မိုဘာဟီလာစိန်ခေါ်မှုကို မတက်ရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သူနဲ့ ဆက်ဆိုင်တဲ့
ဖြစ်ပါတယ်။နောက် အရှင်မြတ်ထံ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းတာက ……
အို အကျွန်ုပ်၏အရှင်သခင်! မကောင်းမှုပြုလုပ်သူများနှင့် ထောင်ထား
ခြားနားသူများအပေါ်အရှင်မြတ်၏ ကျိန်ဆဲမှုသက်ရောက်ပါစေ။ အချိန်အခါနှင့် သတ်မှတ်ထားသော မိုဘာဟီလာသို့လည်းမဝင်ရောက်၊ မယုံကြည်ငြင်းပယ်သူဟု သူတို့၏
စေတော်မူပါ။ အာမင်။ အိုလမာများကို
(ကျွန်ုပ်ကို မယုံကြည်သူဟု သတ်မှတ်ထားသော
အမ်ရစ်ဆာမြို့တွင် ကျင်းပမည့် စိန်ခေါ်မှုသို့ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ပါဝင်ဖို့ရာ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။)
အိုငြင်းပယ်သူတို့! အရှင်မြတ်နှင့် အရှင့်တမန်တော် သတ်မှတ်ပြဌာန်း
ထားခဲ့သော ဘက်သို့လာပါလေ။ ဤသည် မယုံကြည့်သူတို့ နှုတ်ဆိတ်ရာ
ဖြစ်သတည်း။ သို့သော် အကယ်၍ အသင်တို့သည် လှည့်ထွက်သွားကြပါမူ အရှင်မြတ်၏အမျက်တော်ကျိန်စာသည် မယုံကြည်သူတို့အပေါ်ကျရောက်၏။ သူတို့၏
မကောင်းမှုများ အပေါ် သက်သေခံရာ ဖြစ်သတည်း။
မီရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်
Sachcha ika Izhar or The Truth Revealed by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad in Myanmar Language